Voadika ny 08 Janoary 2013 13:33 GMT
Navotsotry ny polisy ireo Bilaogera Ivoariana Mohamed Diaby sy Cyriac Gbogou rehefa avy notànana vonjimaika. Nandray anjara tamin'ny fananganana sehatra vonjy taitra hamonjena ireo niharam-boina tamin'ny fifanosehana tao Abidjan tamin'ny 1 Janoary 2013 izy roa lahy ireo. Saingy tamin'ny 4 Janoary 2013, nosamborina izy ireo taorian'ny fiampangana azy ho mitsabaka amin'ny ezaka ofisialy famonjena ireo tra-doza. Mohamed Diaby nanoratra tao amin'ny bilaoingy [fr] manokana mikasika ny zava-nitranga nahatonga ny fisamborana azy. Nanasongadina ny fahavotsàn'ny [fr] sampandraharaham-panjakana ao Côte d'Ivoire d[fr] ny fitantarana nataony:
Mozambika 20 ora izay